Wararka Maanta: Arbaco, Nov 28, 2012-Wasiirka Gaashaandhigga Somalia oo la kulmay dhigiisa dalka Jabuuti iyagoo kawada hadlay Iskaashiga labada dal
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhigiisa dalka Jabuuti uu kala hadlay sidii ay gacan uga geysan lahayd howlgallada dhib-udhiska ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sheegay in dowaldda Jabuuti uu uga mahadceliyay taageerada ay siiso Soomaaliya, wuxuuna sheegay in dowladda Jabuuti ay gacan weyn ka geysatay fatahaadii ka dhacday magaalada Beledweyn.
Sidoo kale wasiirka ayaa booqday xerooyin ay ku jireen ciidamada daraawiishta Jabuuti, halkaasoo ay ciidamadu kusoo bandhigeen dhoolatus, waxaana wasiirku uu kulamo la qaatay saraakiisha ciidamadaasi.
Dowladda Jabuuti ayaa dalka Soomaaliya u dirtay ku dhowaad ilaa 600- oo askari kuwaasoo qeyb ka ah howlgalka ciidamada Midowga Africa ee AMISOM ay ka wadaan Soomaaliya.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa qeyb ka ah wafdi uu hogaaminayo madaxweeynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Max’uud, kaasoo maalintii labaad ku sugan dalka Jabuuti.